Progressive Voice Myanmar » မီဒီယာဖိတ်ကြားလွှာ – မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ
PV in the News 84 Views
November 24th, 2016 • Author: Progressive Voice •2minute read
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် “အနိမ့်ဆုံးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း – မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ” ဟုအမည်ရှိသည့် သုတေသနအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ Best Western Green Hill ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသည့် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် အလုပ်သမားများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ချက်များဖြစ်သော အလုပ်ချိန်၊ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး စသည့်တို့အပါအ၀င် ရှုထောင့်အမြင် (၄) မျိုးမှ အဓိကထား ဆန်းစစ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ၎င်း၏အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများ ဆက်လက်ရင်ဆိုင် နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုကို သုံးသပ်တင်ပြထားပြီး အလုပ်သမားများ၏ အခြေအနေကို မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း တည်ထောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်သူများထံသို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များ လည်း ထည့်သွင်းတင်ပြထားပါသည်။
မိမိတို့ ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့မှ သုတေသနတွေ့ရှိချက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး များကို ကာကွယ်မြှင့်တင်ပေးသည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားအရေး လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နေသော အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြမည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နေ့ရက် – ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့
အချိန် – နေလယ် ၂း၀၀ မှ ၄း၀၀ နာရီထိ
နေရာ – Best Western Green Hill Hotel၊ အမှတ် ၁၂ ဖိုးစိန်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
အောင်ခိုင်မင်း၊ ယာယီတာဝန်ခံ၊ ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့
+၉၅ (၀) ၉၂၆ ၁၀၀ ၉၉၉၅၊ akm@progressive-voice.org (မြန်မာ နှင့် အင်္ဂလိပ်)
Media Advisory: Launch ofaReport on the Garment Industry in Myanmar
A new report, “Raising the Bottom: A Report on the Garment Industry in Myanmar,” will be launched on 1 December, 2016 at the Best Western Green Hill Hotel in Yangon, Myanmar. The report focuses on the fast-developing garment industry in Myanmar and examines four key aspects of concerns for workers including working hours, working conditions, the impacts of minimum wage, and trade unions and labor dispute settlements. The report offersaglimpse into one of the many challenges Myanmar and its garment factory workers continue to face and providesaset of recommendations to relevant actors that are intended to improve the worker’s situation and createasustainable industry in Myanmar.
Joined by speakers from local civil society organizations working on labor issues in Myanmar, Progressive Voice will be holdingapress conference to discuss the detailed findings of the research, identifying the challenges and discuss how to work towardsasustainable industry that promotes and protects the rights of the workers. The press conference will be held in Burmese language.
When: 1 December, 2016; 14:00 -16:00
Where: Best Western Green Hill Hotel, Emerald Room
No. 12, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar
Aung Khaing Min, Interim Coordinator; Progressive Voice: +95 (0) 926 100 9995, akm@progressive-voice.org (Burmese/English)